Brezila: Hanana Lalana Natokana Ho Azy Ireo Ny Mpitaingina Bisikileta ao Fortaleza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2013 0:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, русский, Português
[Ny rohy rehetra ato dia mivantana mankany amin'ny pejy portiogey afa-tsy ireo ambara manokana]
Hanana sehatra manokana ho an'ireo mpampiasa azy ny mpitaingina bisikileta ao Fortaleza atsy ho atsy.
Nanomboka nametraka lalana ho an'ny bisikileta tao amin'ny arabe Ana Bilhar, kihon-dalana vitsy miala ny moron-dranomasina ao amin'ny distrikan'i Meireles, tamin'ny 16 Septambra 2013, ny Transit, Fahefana Monisipaly sy Mpisahana ny Asam-bahoaka, fantatra amin'ny fanafohezana hoe AMC amin'ny teny Portiogey. Ny fametrahana io lalana bisikileta io dia fandresena lehibe vokatry ny fihetsiketsehana nataon'ny mpitondra bisikileta, indrindra ny vondrona Massa Crítica Fortaleza.
Ny 4 Aogositra, mambra tao amin'ny vondrona no nandray an-tanana sy namaritra lalam-bisikileta tamin'izany arabe efa voatonona izany. Nandrakitra an-tsary ny hetsika ary mizara izany eny amin'ny tambajotra ny andro iny ihany ka niteraka famelan-kafatra sy fandokafana ny vondrona haino aman-jery Verso de Pé Quebrado – Narrativas . Tsara ny manamarika ny fitaovana nampiasain'ireto mpikambana tamin'ny fandokoana ny lalana, nampiasa ireo kalesy fiantsenana sy fatsona hanapariahana ny loko eny amin'ny arabe.
Saingy nanaisotra ny tsipiky ny lalan'ny “olom-pirenena” ny AMC ny alin'ny 5 aogositra, tao aorian'ny fihaonana tamin'ny tompon'andraikitry ny lalam-bahoaka.
Nametraka fandaharam-potoana hihaona amin'ny mpiasa aoo amin'ny AMC ny vondrona avy eo mba hanerena azy ireo hanasaraka amin'ny loko ny lalana ho an'ny bisikileta. Nanapa-kevitra ny AMC tamin'ny farany, hamerina ny tsipika ho an'ny lalan'ny bisikileta tamim-pomba ofisialy.
Hajao ny mpitaingina bisikileta sy fivoizana ampilaminana
Andro maromaro mialoha ny hetsika hametraka lalana ho an'ny bisikileta, nisy mpitaingina bisikileta voahosy ka maty, izay nahatezitra ireo mpankafy ny mpifamoivoy amin'ny kodiaran-droa. Tamin'ny 25 Jolay lasa teo, voahosin'ny fiarabe ary maty tsy tra-drano ny lahiantitra iray 61 taona antsoina hoe Francisco Severiano Filho raha avy niasa ka nitaingina bisikileta tao Avenida da Universidade. Mba ho fanarahana ny fomba iraisam-pirenena amin'ny fandokoana ho fotsy ny bisikileta ho fanomezam-boninahitra ireo mpitaingina bisikileta maty vokatry ny loza , dia nanantona bisikileta fotsy nandritra ny hetsika natsoin'izy ireo hoe Bicicleta Fantasma (Bisikileta Matoatoa) ireo mpikambana ao amin'ny Massa Crítica sy ireo mpanohana azy.
Bisikileta matoatoa ho fatsiarovana an'i Francisco Severiano, izay maty voahosin'ny fiara. Sary tao amin'ny saritavan'i Massa critica Fortaleza ao amin'ny facebook, nahazona alalana.
Nasian'ny [tanànan'i] Fortaleza fefy ny lalana ho an'ny bisikileta amin'ny lalambe sasantsasany, fa misy lalana nosarahana tamin'ny loko fotsiny, hita ao amin'ny lalana Benjamin Brarsil ao amin'ny distrikan'i Maraponga. Ny lalam-bisikileta mirefy 2 kilometatra ao Ana Bilhar, no ho lalana faharoa ao amin'ny tanàna hosarahana amin'ny loko.
Mpampiasa Facebook Felipe alves faly nizara ny vaovao ary nanararaotra hiantsy ireo misalasala:
Mbola misy sahy hilaza ihany ve fa tsy handaitra ny hetahetam-bahoaka? Ary fanombohana ihany izao. Mankasitraka ny Massa Crítica sy ny Fikambanan'ny Mpitaingina Bisikileta an-tanàndehibe ao Fortaleza-CICLOVIDA!
Naseho vahoaka tamin'ny 13 Septambra, andro vitsy mialoha ny Semana da Mobilidade (herinandron'ny fivoizana), hetsika karakarain'ny Fikambanana Mpitaingina Bisikileta an-Tanan-dehibe ao Fortaleza-CICLOVIDA ny fanampaha-kevitry ny Fiadidiana Monisipaly, ary notendrena hampieritreritra ny olona ny Massa Crítica fa tena afaka misolo ny fitaterana an-drenivohitra ny bisiliketa. Ahitana adihevitra, fiaraha-mivoaka, ary hetsika samihafa natao hanentanana ny mpitondra fiara ao anatin'ny fandaharana izay hahatratra ny faratampony amin'ny Andro Manerantany Tsy Ampiasana Fiara ny 22 Septambra.